Ny fifandraisana dia manondro ny halehiben'ny fifandraisan'ny mponina amin'ny fifanakalozana atody, olitra, zaza tsy ampy taona, na olon-dehibe. Izy io koa dia manondro ny fifandraisan'ny tontolo iainana mifandray amin'ny toeram-ponenana mifanila sy lavitra. Ny fifandraisana ao anatin'ny faritra arovana sy eo anelanelan'ny faritra arovana dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ny fahasamihafana, ny tahirin-trondro, ary indrindra ny fikojakojana fiarovana ara-tontolo iainana.
Fametrahana tsy tapaka ny olitra avy amin'ny MPA iray mankany amin'ny iray hafa
Ny zavamananaina an-dranomasina ao amin'ny faritra misy azy, ary mivezivezy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa
MPA Network any Raja Ampat, Indonezia. Sary © Joseph Orsi/TNC Photo Contest 2019
Ny fandinihana vao haingana koa dia mampiseho fiovaovana goavana eo amin'ny halaviran'ny olitra, ary ny halaviran'ny fanaparitahana ambany kokoa noho ny noheverina teo aloha (oh: 100 m hatramin'ny 1 km hatramin'ny 30 km). ref Ohatra, ny halaviran'ny olitra amin'ny trondro haran-dranomasina dia mirona any amin'ny 5-15 km ary matetika ny fandraisana mpiasa tena. ref Noho izany, tokony ho < 15 km ny elanelan'ny tahiry ary mifanakaiky kokoa ny elanelana kely kokoa. Ny fifandraisana eo amin'ny isan'ny karazana haran-dranomasina dia voalohany indrindra, na ho an'ny karazana sessile irery ihany, noho ny fiparitahana mandritra ny fiainan'ny larva. Ho an'ny ankamaroan'ny karazana haran-dranomasina izay nodinihina, ny fifandraisana ara-demografika dia hita fa miasa amin'ny mizana hatramin'ny folo kilometatra, fa tsy amin'ny mizana an-jatony kilometatra na mihoatra. Misy fiantraikany amin'ny habe takiana amin'ny MPA ao anatin'ny tambazotra iray ity lamina eo an-toerana ity amin'ny fandraisana mpiasa tena sy ny fifandraisana eo amin'ny haran-dranomasina ary mety manondro fa na dia MPA kely aza dia mety hizaka tena. Fanampin'izany, ny fikarohana vao haingana momba ny Great Barrier Reef dia mampiseho fa ny tambajotram-piarovana an-dranomasina voaaro tsara dia afaka mitondra anjara biriky lehibe amin'ny famenoana ny isan'ny trondro na ao anatin'ny tahiry na eo amin'ireo haran-dranomasina mifanila aminy. ref
Ny fihetsehan'ny olon-dehibe amin'ny ankapobeny dia kely kokoa noho ny hetsiky ny olitra. Miovaova be ny fomba fihetsehan'ny karazana olon-dehibe isan-karazany. Mba hiarovana karazam-biby isan-karazany ao anatin'ny MPA, dia mila dinihina amin'ny famolavolana tambajotran'ny MPA ny karazana hetsika olon-dehibe maromaro. Ny habetsaky ny fiarovana omen'ny MPA ho an'ny karazana dia miankina (amin'ny ambaratonga sasany) amin'ny fahazarana mihetsika sy ny halaviran'ny tsirairay (na olon-dehibe na olitra). ref Raha mihetsiketsika ny olon-dehibe, ny ranomasina dia lehibe sy manaparitaka. Raha mipetraka ny olon-dehibe, dia mety ho kely sy miavaka ny manodidina ny ranomasina.
Ny azota sy ny akora organika vokarina amin'ny haran-dranomasina na entina avy any amin'ny endriky ny diky ny trondro herbivora sy ny zavamananaina hafa, dia manome otrikaina sarobidy ho an'ny vondrom-piarahamonina haran-dranomasina. Ny famindrana fitaovana dia manampy amin'ny fampandehanana sy ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitra.
Toeram-pisakafoanana manan-danja ho an'ny trondro amin'ny alina ny farafara ahi-maitso sy ny fasika manodidina ny haran-dranomasina, toy ny tsipìka sy ny grenady, izay mialokaloka amin'ny haran-dranomasina isan'andro. Rehefa avy mamahana eny amin'ny ahitra sy ny fasika dia miverina any amin'ny harambato ny trondro, ary mametraka otrikaina (eo amin'ny tranokalan'ny haran-dranomasina) ary mandray anjara amin'ny fitomboana sy ny fanarenana ny vondrom-piarahamonina haran-dranomasina.
Ny rano mikitoantoana sy ny fiantraikan'ny ala honko dia mety hampihena ny fihenan-tsakafon'ny haran-dranomasina amin'ny fivalozana. Ho fampahalalana bebe kokoa sy ny tari-dalana momba ny faharetana sy ny ala honko Mitantana ny ala honko amin'ny fahantrana amin'ny fiovan'ny toetrandromanokatra fisie PDF .
Vakio ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaotari-dalana farany amin'ny fampidirana ny fiparitahan'ny olitra sy ny fomba fihetsehan'ny trondro haran-dranomasina amin'ny famolavolana ny tahirin-dranomasina.